Antony hisafidianana lasantsy noho ny fiara diesel - Victor Mochere
Ny adihevitra momba ny lasantsy na ny gazoala dia nampientanentana sy nampisafotofoto ny mpamily nandritra ny am-polony taona maro - ary tsy dia nampiana firy tamin'ny fitomboan'ny olana momba ny kalitaon'ny rivotra. Na izany aza, ny gazoala dia tsy maty ary amin'ny toe-javatra sasany dia mbola mijanona ho safidy mazava ho an'ny mpamily sasany miankina amin'ny lafin-javatra maro azo ampiharina - fa tsy ny safidin'ny tena manokana. NY torolàlana lalina mandinika ny zava-bita sy ny fomba fitondran'ireo motera roa ireo, miaraka amin'ireo sarany sy lafin-javatra maro momba ny tontolo iainana mifandray amin'izy ireo hanampy anao hanao safidy tsara.
Ireto ny antony tokony hisafidianana ny lasantsy noho ny fiara diesel.
1. Mora kokoa ny fiara lasantsy
2. Saika tsy misy fahasamihafana eo amin'ny vidin'ny solika sy ny gazoala
3. Ny lasantsy dia azo avadika mora ho CNG
4. Mora kokoa ny fanamboarana ny motera lasantsy
5. Ratsy ho an'ny tontolo iainana ny motera diesel
6. Mitabataba ny motera diesel
7. Mahery kokoa ny maotera lasantsy
8. Ny maotera lasantsy dia mamaly kokoa
Ny fiara lasantsy dia mora vidy noho ny gazoala. Ny fiara gazoala vaovao dia mitentina iray taonina miaraka amin'ny hetra apetraka aminy. Miharatsy kokoa ny fitotongan’izy ireo isan-taona raha oharina amin’ny fiara lasantsy. Ny fihenam-bidy dia midika ny tahan'ny fihenan'ny sandan'ny fiara raha amidinao ho fiara efa niasa. Aza adino ihany koa fa ny fiara lasantsy dia mora karakaraina raha oharina amin'ny fiara gazoala.
Ny olona taloha dia nividy fiara gazoala lafo vidy ary miaraka amin'ny fahasamihafana eo amin'ny vidin'ny lasantsy sy ny gazoala, dia mahazo ny vola fanampiny rehetra lany ao anatin'ny herintaona izy ireo ary avy eo mandany latsaky ny vidin'ny lasantsy. Ankehitriny anefa dia niova izany. Voalohany indrindra, araka ny efa norakofanay noho ny fiakaran’ny hetra amin’ny fiara gazoala dia tena lafo tokoa raha oharina amin’ny fiara lasantsy ary mainka fa ny vidin-tsolika dia saika mitovy.
Raha manapa-kevitra ny hanova ny fiara lasantsy ho CNG ianao dia vintana satria tsy mila fanovana be dia be ilaina amin'ny fanaovana izany. Ny famadihana motera diesel ho CNG anefa dia mitaky fanovana be dia be amin'ny motera ary lafo be raha oharina amin'ny mamadika motera lasantsy.
Tsy azo ihodivirana ny tsy hahomby ny milina ary rehefa manao izany izy ireo dia tsara kokoa ny manana motera lasantsy noho ny motera diesel satria mora kokoa ny manamboatra azy ireo. Misy lehibe anefa eto. Ny motera Diesel dia tena matanjaka ary matetika miasa ela kokoa noho ny motera lasantsy, fa ny ampahany sasany amin'ny motera diesel raha tsy mahomby dia tena lafo ny fanamboarana noho ny vidin'ny asa sy ny fisian'ny ampahany. Azo lazaina fa saika mitovy amin’ny an’ny lasantsy izy io satria mihena ny tsy fahatomombanan’izy ireo fa rehefa tsy mahomby dia lafo kokoa.
Ireo motera ireo dia mamokatra entona toy ny setroka izay tsy mety amin'ny tontolo iainana mihitsy. Vitsy kokoa ny entona mamokatra entona entona entona fandoroana ny tontolo iainana toy ny NOx noho ny CO2. Ny lasantsy kosa dia mamokatra poti-javatra mandoto rivotra kely kokoa.
Ny mitondra fiara mandeha amin'ny gazoala dia mahasosotra, raha ny kely indrindra. Noho ny tahan'ny fanerena avo kokoa, dia manao 'boom' lehibe kokoa ao amin'ny efitrano fandoroana izy ireo ary manampy fotsiny amin'ny lisitry ny loharanon'ny fandotoana feo. Mety tsy dia hita loatra izany fa ny loton'ny tabataba dia mety hiteraka olana ara-pahasalamana lehibe toy ny fiakaran'ny tosidrà, aretim-po ary adin-tsaina.
Ity iray ity dia lasa manjavozavo kely. Ny motera diesel dia tsy natao ho an'ny hafainganam-pandeha. Manana torque avo izy ireo amin'ny fipoahana fohy amin'ny fanombohana izay manome azy ireo haingana tsara. Ny motera lasantsy kosa dia miankina amin'ny fihodinan'ny motera izay manome hery azy amin'ny sehatra midadasika kokoa raha oharina amin'ny gazoala ka ahafahan'izy ireo manana RPM bebe kokoa, hery mitaingina ary haingana kokoa amin'ny 0-100 km/ora.
Ny motera lasantsy dia manana valiny throttle tsara kokoa raha oharina amin'ny motera diesel noho ny fananana herinaratra tsara kokoa. Izany dia mahatonga ny motera lasantsy hahatsiaro ho maivamaivana kokoa raha mandeha ny gazoala.
Ireo no antony tokony hampiasana lasantsy ny fiaranao manaraka. Handray soa ny tenanao sy ny tontolo iainana ianao amin'ny fisafidianana lasantsy noho ny gazoala.